जनताका लागि काम गर्न एमालेमा गएकी हुँ : अनिता यादव
नेतृ, नेकपा एमाले
० तपाईं राष्ट्रिय जनता पार्टीकी कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । तर, अचानक नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो । किन होला ?
— म झण्डै १४ वर्षअघि नेकपा एमालेमै थिएँ । हामीले २०६४ मा आएर तमलोपा गठन ग¥यौं । करिब २० वर्षदेखि स्थानीय तहको चुनाव हुन सकेको थिएन । देश विकासका लागि स्थानीय तहको विकास हुनु जरूरी हुन्छ । स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएर मधेशको विकास गर्ने हाम्रो सोच थियो । तर, राजपा यसबाट पछाडि हट्यो । म विगतमा धनुषा ५ नम्बरबाट चुनाव लडेको थिएँ । म पराजित भए पनि त्यहाँका जनताका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच थियो । तर, त्यसमा राजपा र मेरो कुरामा मत भिन्नता थियो । त्यसकारण मैले पार्टी परित्याग गर्ने निर्णय गरेँ । राजपामा बसेर मधेशका लागि जुन काम मैले गर्न पाएको थिइनँ, त्यो काम एमालेमा बसेर गर्न सक्छु भनेर नै म यो पार्टीमा पुनः आबद्ध भएकी हुँ ।
० एउटा त चुनावको कुरा तपाईंले भन्नुभयो । अरू कुन कारणले गर्दा तपाईं राजपाबाट निस्किनुभयो र एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो ?
— राजपा ६ वटा दल मिलेर एउटा त भयो । ६ वटा पार्टी मिले पनि उनीहरूको विचार मिलेको देखिएन । अर्कोतर्फ उनीहरूको विचारको अन्यौलतामा हाम्रो भूमिका पनि केही नहुने देखियो । हामी पदमा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कुनै भूमिका नहुने अवस्था देखियो । कोषाध्यक्ष पद मात्र थियो । देखाउनका लागि मात्र मलाई कोषाध्यक्ष बनाइएको थियो । राजपामा त्यो पदको कुनै औचित्य मैले देखेको थिइनँ । पद त थियो, तर कुनै अधिकार दिइएको थिएन । म एक वर्षअघि कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएको थिएँ । तर, पार्टीले मलाई कुनै अधिकार दिएको थिएन ।
० ६ वटा पार्टी एकीकृत भएपछि तपाईंलाई अधिकारबाट वञ्चित पारियो कि तमलोपा रहेकै बेलादेखि अधिकारबाट वञ्चित पारियो ?
— म तमलोपामा एक वर्ष अघिदेखि नै कोषाध्यक्ष थिएँ । तर, तमलोपा हुँदाखेरी नै मलाई देखाबटी रूपमा पद मात्र दिइएको थियो । मलाई कुनै कार्यभार दिइएन ।
० तपाईंलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको थिएन भने पार्टीभित्रै पनि आवाज उठाउन सक्नुहुन्थ्यो नि ?
— कोषाध्यक्ष भएर पनि जिम्मेवारी नदिनु एउटा पक्ष थियो । अर्को, म जनप्रतिनिधि थिएँ । मलाई धनुषाका जनताले मत दिएका थिए । हो, म चुनावमा धनुषाबाट पराजित भएको थिएँ । तर, जसले मलाई मत दिए, तिनीहरूका लागि पनि मैले के ीगर्न सकिरहेको थिइनँ । म चुनावमा दोश्रो स्थानमा आएको थिएँ । ठिक छ, कोषाध्यक्षको अधिकार नदिए पनि जनताका लागि काम गर्ने वातावरण पनि थिएन । यसका साथै अर्को पनि कुरा छ । अहिले २० वर्षपछि स्थानीय तहमा चुनाव हुन गरिरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरू आएपछि स्थानीय तहमा विकासको लहर चल्छ । तर, यसमा पनि राजपा पछाडि हट्यो ।
० विभिन्न कारणहरूमध्ये तपाईं नेकपा एमालेमा जानुको मुख्य कारण चाहीं के थियो ?
— नेकपा एमालेमा तानिएर गएको होइन । खासमा मलाई राजपा परित्याग गर्नु एकदमै आवश्यक भइसकेको थियो । जहाँसम्म एमालेको कुरा छ । एमालेमा म विगतमा काम गरिसकेको छु । यो पार्टीमा जाँदा काम गर्न सहज हुन्छ भनेर गएकी हुँ । यसका साथै मधेशको विकासलाई नेकपा एमालेले प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटकै कुरा गर्ने हो भने एमालेको सरकार हुँदा मधेशका लागि प्रयाप्त बजेट छुट्यान्छ । जहाँसम्म मधेशको एजेण्डाको कुरा छ । एमालेमा आएर मधेशको एजेण्डा छाडेको कुरा पनि होइन । मधेशको विकास, अधिकारलगायत कुरामा म दृढ छु ।
० मधेशकेन्द्रित दलबाट निस्किनुभयो । तर, नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुलाई धेरैले आश्चर्य मानेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
— एमालेमा जानु आश्चर्यको कुरा होइन । के एमालेमा मधेशका नेता छैनन् ? मधेशमा एमालेका कार्यकर्ता छैनन् ?
० तर, तपाईँ खाटी मधेशवादी नेतृ हुनुहुन्थ्यो नि ?
— मधेशवादी भएर हुँदैन । मुख्य कुरा मधेशी जनताको अधिकार र विकासका लागि को चिन्तित छन्, त्यो महत्वपूर्ण कुरा छ । कुनै पनि पार्टीमा गएर मधेशका लागि काम गर्न सकिन्छ ।
० एमालेमाथि मधेश विरोधीको आरोप लागिरहेका बेला तपाईं यसमा प्रवेश गर्नुभयो नि ?
— होला, कसैको त्यस्तो विचार हुन सक्छ । तर, मेरो यस्तो विचार होइन । मलाई जनताका लागि काम गर्नुपर्ने थियो । त्यसैका लागि एमालेमा प्रवेश गरेकी हुँ । म विगतमा एमालेमा काम गरिसकेको छु त्यसैले यो पार्टीमा आएकी हुँ ।
० राजपामा हुँदा तपाईंले पनि एमालेको विरोध गर्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले चाहीं मधेशको एकदमै हित चाहने पार्टी भन्न थाल्नुभएको छ नि ?
— नेकपा एमाले मधेश विरोध हो भनेर भ्रम फैलाइएको हो । एमाले मधेश विरोधी होइन भन्ने कुरा उसले गरेको कामले प्रष्ट पार्छ । केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला मधेशका लागि प्रयाप्त बजेट आएको नाटक हो ? एमाले मधेशको हित चाहन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । काम गर्न सहज हुने भएर म एमालेमा प्रवेश गरेकी हुँ । म यो पार्टीमा रहेर जनताका लागि काम गर्न सक्छु ।
० राजपाले मधेशीको हितका लागि उठाएका एजेण्डा लिएर एमालेमा जानुभएको हो कि एजेण्डा पनि छोड्नुभएको हो ?
— म राजपाको एजेण्डाभन्दा पनि मधेशका एजेण्डालाई बोकेर एमालेमा गएकी हुँ । मधेशीका जायज माग सम्बोधनका लागि संघर्ष गर्छु । राजपाका शतप्रतिशत एजेण्डा सही नहुन सक्छ । म मधेशीको विकास र अधिकारका एजेण्डाका लागि लड्छु । मलाई आफ्नो लागि होइन, मधेशी जनताको हितका लागि काम गर्नुछ । मधेश सुगम ठाउँ भए पनि केही स्थान हिमालको भन्दा पनि पछाडि परेको छ ।
० संविधान संशोधनका विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
— संविधान संशोधन परिवर्तनीय दस्तावेज हो । संविधानका कुनै कुरामा असन्तुष्टि छ भने त्यसलाई संशोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । मैले पहिला पनि राजपामा हुँदा नेताहरू भनेको थिएँ कि जनता हामीसँग छ भने चुनावमा जाऔं । त्यहाँबाट जितेर आएर सबैलाई देखाइदिन सक्थ्यौं कि हामी मधेशका लागि लडेको सही हो । त्यसैले हामी चुनाव रूपी आन्दोलनमा सहभागी होऔं ।
० स्थानीय तहको संख्यावृद्धिको विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
— तीन नम्बर प्रदेशमा ५५ लाखभन्दा बढी संख्यामा एक सय १९ सिट छ । दुई नम्बर प्रदेशमा ५४ लाखभन्दा बढीमा एक सय २७ वटा सिट छ । भनेपछि त्यहाँको दाँजोमा बढी नै छ । समग्रमा भन्ने हो भने यो मागमा मेरो समर्थन छ । किन भने सिटका हिसाबले बजेट आउँछ । तर, यी सबै माग विस्तारै सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । अहिले नै सबै माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर देशलाई अस्थिरताको बन्दी बनाउनु हुँदैन ।
प्रकाशित मिति ः २०७४ साउन ६ गते